Seranam-piaramanidin'i Paris-Orly - Wikipedia
3 650 11 975 simenitra misy bitioma
3 320 10 892 simenitra
2 400 7 874 simenitra
Seranam-piaramanidina • seranam-piaramanidina araka ny firenena
Lisitra ny Seranam-piaramanidina • araka ny kaody AITA
araka ny isan'ny mpandeha
Ny seranam-piaramanidin'i Paris-Orly (kaody AITA : ORY, kaody OACI : LFPO), afohezina aéroport d'Orly amin'ny fiteny malagasy sy amin'ny fiteny frantsay, dia seranam-piaramanidina any Île-de-France 14 any atsimon'i Paris, tsy lavitry ny kaominin' Orly. Ny seranam-piaramanidina, ny gara sy ny lalany, dia anelanelana departementan' Essone sy Val-de-Marne.
Ny seranam-piaramanidin'i Paris-Orly dia ampiasaina ho an'ny sidina am-paritany, eoropeana sy ny sidina makany Magreba, Azia Andrefana, DOM-TOM frantsay sy Québec (Montréal sy Qyébec).
Ilay seranam-piaramanidina dia seranam-piaramanidina faharoa any Île-de-France eo aorian'ny seranam-piaramanidin'i Paris-Charles-de-Gaulle, ary seranam-piaramanidina eoropeana fahafolo, olona 229 335 mivezivezy isan-taona tamin'ny 2006. Voazara aerogara roa izy : ny aerogara Atsimo ary ny aerogara Andrefana (hall efatra), ary manana lalana telo. Any Orly koa misy aerogara anaovana fret sy toerana hikojakojana fiaramanidina. Ny Aéroports de Paris (ADP) no mitantana ilay seranam-piaramanidina.
Noho ny hakitroky ny mponina eo amin'ny toerana isiany (2500 mpo./km²), tsy mety avelatra ohatra ny seranam-piaramanidin'i Paris-Charles-de-Gaulle ny velarantany alain'i Orly.
Fisiana ara-jeografia[hanova | hanova ny fango]
Ny seranam-piaramanidin'i Paris-Orly dia 14 kilometatra any atsimon'i Paris. Namboarina teo amina dongolava petaka tanteraka izy, manana anarana plateay de Longboyau, manana haavo 88 metatra. Any andrefana, misy tanety kely mametra ny jery ; any atsinanana, "milatsaka" eo amin'ny Seine ny dongolava. Ny toe-tanin' ilay seranam-piaramanidina dia toe-tanin-dranomasina somary simbasimba, ny hafanana dia + 4 °C amin'ny volana Jaoary ary 19 °C amin'ny volana Aogositra. Rehefa tsy manjavona ny andro, afaka hita avy any Orly ny Tour Eiffel sy ny tour Montparnasse rehefa mijery any avaratra.
↑ Ny fihetsika ny avaratry ny famataranavaratra dia manova ny todika ara-pamataranavaratr' ilay lalana. Izay ny nampalasa azy 06/24 tamin'ny 2003, fa tsy 07/25 intsony
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Seranam-piaramanidin%27i_Paris-Orly&oldid=691296"
Voaova farany tamin'ny 4 Janoary 2014 amin'ny 22:02 ity pejy ity.